HumHub 1.7.1: Ntughari ohuru nke Open Source Social Network SW | Site na Linux
HumHub 1.7.1: Ntughari ohuru nke Open Source Social Network SW
A obere ihe karịrị otu ọnwa gara aga, ndị ọhụrụ mbipute a Software a tọhapụrụ, HumHub 1.7.1, na ọ fọrọ nke nta ka anyị funahụ ya. Ma ebe ọ bụ, ugbu a isiokwu nke nzuzo online dị na ejiji, maka oge iri na atọ, ọkachasị n'ihe gbasara Sistemu Ntanetị na Netwọk mmekọrịta, maka akụkọ ọjọọ na-esote, nke na-esitekarị WhatsApp na Facebook, n'etiti ndị ọzọ, ọ dị mma ịkọwapụta Ngwọta ngwanrọ, n'efu ma mepere emepe, na-enye ohere izere akụkọ ọjọọ a na-ekwu.
Ọzọkwa, ọ dị ntakịrị karịa afọ 4 kemgbe anyị kọọrọ banyere akụkọ nke a na-adọrọ mmasị ma bara uru Free Social Network Software, nke na-eje ozi dị ka ụzọ dị mma iji nye ndị ọrụ bara uru na usoro iji rụọ ọrụ mfe na ihe ịga nke ọma na-arụkọ ọrụ ọnụ.
Tupu ịbanye n'ụzọ zuru ezu ozi ọma nke HumHub 1.7.1Ọ bara uru ịkọwa echiche nke otu ihe ahụ egosiri m n'oge ahụ:
"HumHub bụ ngwanrọ na-emeghe ma na-emeghe, nke mepụtara na Php na Yii Framework, nke na-enye ọkụ, dị ike ma dịkwa mfe iji ngwa ọrụ nke na-enye ohere ịmepụta na ịmalite nke netwọkụ mmekọrịta gị. HumHub na-akwado isiokwu na modulu na-agbatị ọrụ maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile achọrọ." ¿Etu esi enweta netwọkụ mmekọrịta gị na HumHub?
Maka ozi emelitere ọzọ na / ma ọ bụ nbudata nke HumHub, ị nwere ike ịga leta gị ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị n'ịntanetị. Ọ na-abịa na ndabara, na Bekee ma ọ bụghị na-agụnye nkwado maka asụsụ Spanish.
1 HumHub 1.7.1: Mmelite ugbu a
1.1 Ihe dị ọhụrụ na HumHub 1.7.1: Ntọhapụ ndị edeturu
1.2 Ihuenyo gbaa
HumHub 1.7.1: Mmelite ugbu a
Ihe dị ọhụrụ na HumHub 1.7.1: Ntọhapụ ndị edeturu
Dabere na ndị mmepe ya, atụmatụ ọhụrụ etinyere na mwepụta a nwere njikọ zuru oke na mmezi nke chinchi ndị gara aga, ụfọdụ n'ime ndị a bụ:
Ofu ahụhụ # 4612: Metụtara ngosipụta nke aha njirimara na ụfọdụ ọcha na mgbidi nke Board (Dashboard).
Ofu ahụhụ # 4614: Ejikọtara njikọ nke foto profaịlụ na-agbaji.
Emehiere mperi # 4607: Na-ezo aka ịgbanwe nha nke ntanetị preview ihe oyiyi na gburugburu mmiri.
Emehiere mperi # 4609: Njikọ na njehie na downscaling iwu.
Emehiere mperi # 4621: Ejikọtara ya na nhazi na-ezighi ezi nke onyinyo ahụ na mbenata ọnụ ọgụgụ na imagick.
Emehiere mperi # 4628: N'izo aka na nhazi nke nsogbu nke mmekorita nke gallery nke okwukwo na ihe ndi ozo.
Ọ bụ ezie na mbipute ya gara aga, ọnụọgụ 1.7.0, site na ụbọchị ole na ole gara aga, naanị gụnyere ihe abụọ ndị a na - esonụ:
Ofu ahụhụ # 4590: Agba dị iche nke na peeji nke Loader dị oke ala.
Ofu ahụhụ # 4599: The preview faịlụ bụ anya ma ọ bụrụ na ọ na-initialized na ndabere.
Nyere, HumHub bụ a Sistemụ nnabata websaịtị na sava nke onwe ma obu nke ato, ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti nwere ihe na-adọrọ mmasị online ngosi na-enye gị ohere ịlele Usoro sistemụ, dị ka a hụrụ na foto ndị a:
Agbanyeghị, ọ na-anọgide na ndị nwere mmasị budata HumHub n'efu ma gbaa ọsọ na sava gị. Edere ha na mbụ maka ntinye ha na ojiji site na ịpị ndị na-esonụ njikọ. Mgbe maka ozi ndị ọzọ ị nwere ike ịga gọọmentị saịtị na GitHub.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «HumHub», Mmasị Social Network na-adọrọ mmasị ma baa uru n'efu nke na-eje ozi dị ka ụzọ dị mma iji nye ngwa ọrụ na usoro iji mee ka otu ọrụ dị mfe ma nwee ọganiihu; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » HumHub 1.7.1: Ntughari ohuru nke Open Source Social Network SW
NzuzoTools: Ebe nrụọrụ weebụ bara uru ma baa uru maka nzuzo n'ịntanetị